HomeWararka CiyaarahaJuventus oo qorsheyneysa inay lasoo wareegto Xidiga Bernardo Silva
October 12, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Serie A ka dhisan ee Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay amaah ku soo qaadato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Bernardo silva .
Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday xagaagii in 27 jirkaan uu kooxda ku wargaliyay rabitaankiisa ah inuu baxo, tababaraha reer Spain ayaana soo jeediyay dhowr isbuuc ka hor in mustaqbalkiisa uusan weli hubin .
Waxaa la fahamsan yahay in xiddiga reer Portugal uu weli doonayo inuu ka tago Etihad Stadium sannadka soo socda.
Sida laga soo xigtay Calciomecato , Juve ayaa suuqa ugu jirta xiddig hal abuur leh oo khadka dhexe ah waxayna u aqoonsatay Silva bartilmaameedka amaahda ah ee suuqa jiilaalka.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegeysa in City ay kaliya maaweelin doonto bixitaan joogto ah oo ku aadan ciyaaryahankii hore ee Monaco, kaasoo weli afar sano uga harsan tahay qandaraaskiisa.
Inkastoo la isla dhexmarayo mustaqbalkiisa, Silva ayaa si wanaagsan ku bilaawday ololaha cusub Man City, isagoo ka soo muuqday 10 ka mid ah 13kii kulan ee tartamada oo dhan, oo ay ku jirto guushii 1-0 ee Leicester City ee uu dhaliyay goolka guusha